Si loo dhameystiro riyada Frank Lampard… weeraryahan caan ah oo diirada u saaran Chelsea xagaaga soo aadan – Gool FM
Si loo dhameystiro riyada Frank Lampard… weeraryahan caan ah oo diirada u saaran Chelsea xagaaga soo aadan
(London) 15 Okt 2020. Chelsea ayaa ku guuleysatay suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay inay hesho saxiixyada dhowr ciyaaryahan, si loo xoojiyo safka kooxda tababare Frank Lampard.
Haddaba warbixin lagu daabacay wargeyska “The Sun” ayaa lagu sheegay in maamulka kooxda reer London ay qorsheynayaan inay la soo saxiixdaan weeraryahanka weyn ee naadiga Borussia Dortmund Erling Håland, inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga xagaaga ee soo socda.
Wargeyska “The Sun” ayaa tilmaamay in Erling Håland uu kula jiro kooxda Borussia Dortmund qandaraas lagu burburin karo 63 million pounds, waxayna Chelsea xiiseyneysaa in xiddig kale oo weyn ay ka soo qaadato horyaalka Jarmalka kaddib saxiixyadii Kai Havertz iyo Timo Werner.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in tababare Frank Lampard uu doonayo inuu dhameystiro riyadiisa ku aadan weerarada kooxda Chelsea, si uu u dhameystiro riyada jamaahiirta Blues.
Haaland ayaa soo bandhigay kulamo aad u wanaagsan, ha ahaato xulkiisa Norway ama Borussia Dortmund, maadaama uu 51 gool dhaliyay 48-dii kulan ee ugu dambeysay, taasoo cadeyneysa inuu ka mid yahay weeraryahannada ugu muhiimsan adduunka.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda Chelsea ayaa loolan adag kala kulmi doonta saxiixa Håland, madaama Real Madrid ay muujisay xiisaha ay u qabto weeraryahanka reer Norway si ay u dhisto weerar adag.
Kooxaha Man United iyo Tottenham oo ogaaday qiimaha ay ku heli karaan Paulo Dybala